Pirinty natao tamin'ny Automatic Glass Screen-dalana - China Lanlin Printech
Pirinty natao tamin'ny Automatic Glass Screen-dalana,
Automatic Glass Screen Pirinty natao tamin'ny-dalana,
Mety ho lafiny fiara varavarankely fitaratra, vata fampangatsiahana fitaratra, loko fitaratra, haingon-trano fitaratra, tokantrano sy ireo fitaovana fitaratra kely sy salantsalany salantsalany fisaka fitaratra doko sy ny loko fanontam-pirinty.
◆ Electric-mitsangana maka sy ny fipetrahana eny, tsy nanandra-taratasy kely conveyor fehin-kibo, fifadian-kanina ary ny mafy orina.
◆ Pneumatic eny-Grid rafitra, ho Lift dikan-ny hafainganam-pandeha, hahavony azo ahitsy.
◆ Pirinty natao tamin'ny mpitari-dalana mampiasa Linear miova matetika synchronous fanitsiana hafainganam-pandeha, miaraka amin'ny fanaraha-maso ny toerany photoelectric jiro, fifadian-kanina, mazava toerany.
◆ Ny fahana mandeha ho azy, indray fahana ny asa, dia azo mifandray-paharitry tsipika, miantoka kalitao sy hanatsara ny vokatra.
◆ Compact maty aluminium fanariana, varingarina fametrahana mazava tsara ny tsikombakomba Hard mpitari-dalana Slider mpitari-dalana takelaka manana fitaovana Lift, mora ny hanoloana sy hanasa lamba fanakonana pirinty.
◆ Ny zoro ny fikikisana sy ny rakotra fanaovam-panavotana ranomainty vary azo ahitsy,
◆ Mechanical sandriny fitomboan'ny varingarina pneumatic ny harato eny, mahomby hisorohana ny faritra lehibe ny fanontam-pirinty sy ny fanontam-pirinty vokatra Mametaka dikan-tenin'ny dikan-feta, mba ho azo antoka ny kalitaon'ny vokatra.
Max fanontam-pirinty area
Min fanontam-pirinty area
Max endriny habe
Table maro-loko fanontam-pirinty fametrahana mazava tsara
Hatevin'ny zavatra vita pirinty
480-600 pcs / h
Manodidina ny 400 pcs / h
Mampita ny ambony
Hery mety famatsiana
Machine haben'ny (L * W * H)
Previous: Motor entin'ny Flat Bed Screen Pirinty natao tamin'ny Machines
Next: Tetika ny IR fanamainana for Glass Screen Pirinty natao tamin'ny Machine
5 Color Automatic Glass tavoahangy Screen Pirinty natao tamin'ny Machine
Automatic Screen Printer Fa Soft tahaka ny fantsom
Automatic Screen Printer Machine Fa Soft tahaka ny fantsom
Automatic Screen Pirinty natao tamin'ny Machine Fa Cosmetic Plastic Tube
tavoahangy Screen Printing Machine
tavoahangy / fitoeran-javatra Automatic Screen Pirinty natao Machine
Flatbed Screen pirinty natao tamin'ny Machine
Screen Pirinty natao tamin'ny Machine Fa Caps
Screen pirinty natao tamin'ny Machine Fa Cylindrical zavatra
Screen Printing amin'ny tavoahangy plastika / Cups / fitoeran / siny / tahaka ny fantsom
Screen Pirinty natao tamin'ny Supplies & Equipment
Universal Screen Pirinty natao tamin'ny Machine Fa Glass ary Plastic kaontenera
Universal Screen pirinty natao tamin'ny Machine Fa Plastic Aluminum Caps
Motor entin'ny Flat Bed Screen Pirinty natao tamin'ny Machines
Screen Pirinty natao tamin'ny Machine Special Fa Precis Avo ...